नक्कली नागरिकतासहित २ बंगलादेशी नागरिक पक्राउ | Nagarik News - Nepal Republic Media
नक्कली नागरिकतासहित २ बंगलादेशी नागरिक पक्राउ
नक्कली नागरिकता बनाउने दुई बंगलादेशी नागरिकलाई मंगलबार प्रहरीले सार्वजनिक गदैं ।
२३ कार्तिक २०७३ २ मिनेट पाठ
इटहरी– सुनसरी प्रहरीले ६ जना बंगलादेशी नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ परेकामध्ये दुई जनालाई आज प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरि सार्वजनिक गरेको छ।
सार्वजनिक गरिएका दुई जनाको नक्कली नेपाली नागरिकता रहेको र अन्यको अनुसन्धान भइरहेको डिएसपी बिनोद घिमिरेले बताए । चार जनाको अनुसन्धान नटुगिएकाले गर्दा सार्वजनिक नगरिएको जानकारी दिइयो ।
प्रहरीले सार्वजनिक गरेकामा वंगलादेशको ट्याङग्याल स्थायी ठेगाना भएका हयात मियाँ भन्ने आसान मियाँले पश्चिम कुशहा वडा नं. ९ वस्ने इनुस भन्ने व्यक्तिलाई बाबु बनाएर निकालेको नागरिताको नक्कली प्रमाणपत्र भेटिएको छ । उनले बंशजको आधारको ३०४५।२५६६ नम्वरको नेपाली नागरिकताको नक्कलीे प्रमाण–पत्र लिएको भेटिएको हो ।
यस्तै, वंगलादेशको पावना जिल्ला स्थायी ठेगाना भएका समशेर भन्ने सिजारोल मल्लिकले सुनसरी पश्चिम कुसाहा वडा नं. ४ का सुलेमान मियाँलाई बाबु बनाएर नक्कली नागरिकता निकालेको भेटिएको छ । उनको नक्कली नागरिकताको नं. ३०४५।२८८४ उल्लेख गरिएको छ।
दुवैले नागरिकता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरी वाट जारी भएको पाएकाले गर्दा किर्तेमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिइयो ।
प्रकाशित: २३ कार्तिक २०७३ २०:२६ मंगलबार